Gumiguru Movie Marathon: Haunted House Vhiki - Peji 7 ye7 - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Gumiguru Movie Marathon: Haunted House Vhiki
Gumiguru Movie Marathon: Haunted House Vhiki
yakanyorwa na Mike Joyce October 1, 2019
Chechipiri chiitiko kubva kuna Michael Mann achitevera mhosva inonakidza yemakororo "Mbavha" uye kugadzirisa kwenyaya inotyisa yezita rimwe chete kubva kuna F. Paul Wilson, ichitevera boka revarwi veGerman avo vakadzika musasa munhare yeTransylvanian castle, netsaona vachiburitsa yekare uye chakaipa chine simba chakanyanya kukunda chero chipoko. Iyi firimu ingangoita hodgepodge nekuda kwekunetseka post-kugadzirwa, asi masitayera ekutungamira kwaMann uye cinematography pamwe chete nechinotyisa mamaki kubva kuTangerine Chiroto chakabatanidzwa neyekunaka kwekunyepedzera kweimba yacho kuita nzvimbo isingakanganwike uye yekurota-senge mamiriro. -Jacob Davison
Izvi zvinopedzisa svondo rekutanga remumhanzi weGumiguru marathon. Kumusoro inotevera: Slasher Vhiki!
Iwe unofungei nezve edu ekurudzira kusvika ikozvino? Chii chauri kuona muna Gumiguru? Regai tizive mune zvakataurwa, uye nyorera kune yedu mailing list kuti uwane iHorror mukati meinbox.
Mufananidzo wakaratidzwa neruremekedzo rwaChris Fischer
Mapeji: 1 2 3 4 5 6 7
Halloweenhoramafirimu anotyisaMovie MarathonGumiguru
Mike akatarisa "Husiku hweVakafa Vakafa" paPBS paakanga achiri mudiki, uye akafunga kuti yaive zvinyorwa. Akave akabatwa nechisimba kubva ipapo. Masikati, Mike munyori weUX. Iye anogara munzvimbo yeBoston nemukadzi wake uye yavo yegoridhe retriever.
Iyo 2019 Screamfest Horror Firimu Mutambo Unofumura Wechipiri-Wave
Tightwad Kutya Chipiri - Mahara Mafirimu e10-1-19